Season of Tree, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Ny kely indrindra amin'ny trano dia toy ny spaonjy, isan'andro mianatra zavatra, na tsara na ratsy. Mba hanararaotana an'ity fanjakana fananganana vaovao tsy tapaka ity, ao amin'ny App Store dia afaka mahita fampiharana marobe ho an'ny kely indrindra amin'ny trano isika, fampiharana izay ahafahantsika mampianatra soatoavina fototra ho an'ny fiainana andavan'andro an'ny zanatsika. . Na dia maro aza ny olona no mieritreritra fa tsy tsara ny mamela ny iPad na ny iPhone ho an'ny ankizy kely hampiala voly ny tenany, dia tsy maintsy jerentsika ny fampiasan'izy ireo izany, indrindra raha tsy milalao izy ireo dia mampiasa fampiharana fampiharana toy ny Season of Tree, fampiharana izay manana vidiny mahazatra 1,99 euro ao amin'ny App Store, fa afaka maka maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra isika.
Ny vanim-potoanan'ny hazo dia hitondra ny zanatsika amin'ny dia mahagaga sy tsy hay hadinoina, mankany anaty ala feno loko, zavaboary liana ary fanamby manaitra izay hametrahan'izy ireo ny tenan'izy ireo amin'ny kiraron'ny kamo be volo. Ny Season of Tree dia mandrisika ny fivoarana manontolo sy ny fampianarana amin'ny alalàn'ny fampianarana amin'ny alàlan'ny fanomezana fanamby izay ny ankizy dia tokony hampivelatra ny fahaizany moto, manatsara ny fanekena isa, mampitombo fahalalana momba ny vanim-potoana amin'ny taona ary manaova sakaiza eo amin'ny karazan-karazany izay monina amin'ny ala.
Ny Season of Tree dia mitaky farafaharatsiny iOS 7.0 na avo kokoa Raha te hiasa dia mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod Touch izy io ary natao ho an'ny ankizy 3 ka hatramin'ny 8 taona.
Vanim-potoana fampiasa amin'ny hazo
Manampy amin'ny fampianarana ireo ankizy kely momba ny maha-zava-dehibe ny natiora sy ny vanim-potoana amin'ny taona.
Manampy amin'ny fampiroboroboana ny fisainana sy ny fisainana lojika, noho ny fiovan'ny vanim-potoana.
Ny fankasitrahana isa tsara indrindra dia nitarina.
Manome fanentanana mandanjalanja ny fahatsapana rehetra.
Lalao mini telo izay manentana ny ankizy kely ary koa mampiala voly azy ireo.
Fandraisana feo, sary ary sarimiaina azo tanterahina natao ho an'ny ankizy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Season of Tree, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Apple patanty dia manondro fa ny Apple Watch Digital Crown dia ho tonga amin'ny iPhone ihany koa